Ixabiso eliphantsi lomgubo we-Screw extrusion Umatshini oManzi oSahlulayo oSebenzisa amanzi kunye neFektri | YiZheng
Yintoni iScrew Extrusion Solid-liquid Separator?
Inkqubo ye- Iscrew extrusion Isahluli esingamanzi esiqinileyo sisixhobo esitsha sokuhambisa amanzi esenziwe ngokubhekisele kwizixhobo ezahlukeneyo zokuhambisa amanzi ekhaya nakumazwe aphesheya kwaye zidibanisa neyethu i-R & D kunye namava okuvelisa. Inkqubo ye-Iscrew extrusion Isahluli esingamanzi esiqinileyo ubukhulu becala iqulathe ulawulo lwekhabhathi, imibhobho, umzimba, isikrini, isikrufu esikhutshiweyo, isinciphisi, ukungalingani, isixhobo esothulwayo kunye nezinye izinto, esi sixhobo saziwa kakuhle kwaye sisetyenziswa ngokubanzi emarikeni.
1. Umgquba oqinileyo emva kokuhlukana ulungele ukuthuthwa kunye nexabiso eliphezulu elithengiswayo.
2. Emva kokwahlulwa, umgquba uxutywe kwingqolowa yengca ukuvuselela kakuhle, ungenziwa ngokudityanisiweyo kwisichumiso semveliso emva kokuhlanjwa.
3. Umgquba owohluliweyo ungasetyenziswa ngokuthe ngqo ukuphucula umgangatho womhlaba, kwaye ungasetyenziselwa ukuzalisa imisundululu, ukukhulisa amakhowa kunye nokondla iintlanzi.
4. Ulwelo olwahluliweyo lunokungena ngokuthe ngqo echibini le-biogas, ukusebenza kakuhle kwemveliso ye-biogas iphezulu, kwaye ichibi le-biogas alinakuvalwa ukwandisa ubomi benkonzo.
Ukusebenza komgaqo weScrew extrusion Isahluli esingamanzi esiqinileyo
1.Impahla ityhalwa kwimoto ephambili ngokungavimbeli impompo yeslurry
2. Idluliselwe kwinxalenye engaphambili yomatshini ngokukhama igerger
3. Ngaphantsi kokuhluzwa kwebhanti yoxinzelelo, amanzi aya kukhutshelwa ngaphandle kwaye akhutshwe kwiscreen se-mesh nangaphandle kombhobho wamanzi
4. Ngeli xesha, uxinzelelo lwangaphambili lwe-auger luqhubeka lukhula. Xa ifikelela kwixabiso elithile, izibuko lokukhupha liya kutyhilwa livulelwe imveliso eqinileyo.
5.Ukuze ufumane isantya kunye nomxholo wamanzi wokukhutshwa, isixhobo esilawulayo esiphambili kweinjini eziphambili sinokuhlengahlengiswa ukufezekisa imeko eyonelisayo nefanelekileyo yokukhutshwa.
Ukusetyenziswa kunye neempawu zeScrew extrusion Isahluli esingamanzi esiqinileyo
(1) Inoluhlu olubanzi lwezicelo. Ingasetyenziselwa umgquba wenkuku, umgquba wehagu, umgquba weenkomo, umgquba wedada, umgquba weegusha kunye nobunye ubulongwe.
(2) Ikwasebenza kuzo zonke iintlobo zeentlobo ezinkulu nezincinci zamafama okanye abantu ababandakanyeka kwimfuyo.
(3) Icandelo eliphambili le- Iscrew extrusion Isahluli esingamanzi esiqinileyo umatshini wenzelwe ngentsimbi engenasici, xa kuthelekiswa nezinye izinto, intsimbi engenasici akukho lula ukurusa, umhlwa, ubomi benkonzo ixesha elide.
Iscrew Extrusion Solid-liquid Separator Video Display
Ukujija i-extrusion Solid-liquid Separator Model Ukukhetha
Ngo-1900 * 500 * 1280mm
Ububanzi bokucoca ulwelo
Ububanzi owongozelelweyo lwempompo
Ulwelo olukhupha izibuko
Umatshini womatshini wenziwe ngentsimbi yokuphosa, i-Auger shaft kunye neebhleyidi zenziwe ngentsimbi engenasici 304, isihluzo sesikrini senziwe ngentsimbi engu-304.
1. Ukondla ngempompo yezixhobo zikarhulumente ezingamanzi
2. Ukondla nge-hopper ngezinto zikarhulumente eziqinileyo
Umgquba wehagu 10-20ton / h
Umgquba wehagu owomileyo: 1.5m3/ h
Umgquba wehagu 20-25m3/ h
Umgquba owomileyo: 3m3/ h
Egqithileyo Zenzekelayo Umatshini wokuchumisa umatshini wokubamba
Okulandelayo: Umatshini wokudibanisa idiskhi nkqo